Ukwakhiwa Kwesakhiwo Sokwakha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Isakhiwo Sokwakhiwa Kwensimbi Yokwakha
Steel Sakhiwo Isakhiwo Material Izinkukhu Broiler
Inkukhu epulazini ifaka i-Egg chicken house neBroiler chicken house; zombili ziyizakhiwo zensimbi. Inkukhu yamaqanda ivame ukudla emakhejini, inkukhu yenyama evame ukondliwa phansi. Singakunika izinto zokwakha, zezinto zokusebenza, sincoma ukuthi uthenge kumkhiqizi okhethekile.
Ukwakhiwa kwesakhiwo sensimbi elula uhlobo olusha lohlelo lokwakhiwa kwesakhiwo, olwakhiwa ngohlaka lwensimbi oluyinhloko oluxhumanisa isigaba se-H, isigaba se-Z kanye nezingxenye zensimbi u-U, uphahla nezindonga kusetshenziswa amapaneli ahlukahlukene nezinye izinto ezifana namawindi, iminyango , ama-cranes, njll.
Isakhiwo sesakhiwo sensimbi esisetshenziswa kabanzi ezinqolobaneni, kumasifundisane, emafemini amakhulu, njll.
Ikhwalithi ephezulu ye-Industrial Light Prefabricated Light
LIDA steel isakhiwo isakhiwo zezimboni uhlobo olusha isakhiwo isakhiwo uhlelo. Uhlelo lokwakhiwa kwesakhiwo lwakhiwa uhlaka oluyinhloko ngokuxhumanisa isigaba H, isigaba C, isigaba Z noma izingxenye zensimbi U. Uhlelo lokufaka lusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapaneli njengodonga nophahla kanye nezinye izinto ezifana namawindi neminyango. Isakhiwo sesakhiwo se-LIDA sinezinzuzo zesikhala esibanzi, amandla aphakeme, isisindo esincane, izindleko eziphansi, ukuvikelwa kokushisa, ukonga amandla, ukubukeka okuhle, isikhathi esifushane sokwakha, umphumela omuhle wokufakwa, ukuhlala isikhathi eside usebenzisa impilo, ukusebenzisa isikhala, ukusebenza kahle kokuzamazama komhlaba, ukwakheka okuguqukayo, njll.
Ukwakhiwa kwesakhiwo sensimbi kusetshenziswa kabanzi njengendawo yokugcina impahla, indawo yokusebenzela, isakhiwo se-showroom, ipulazi lezinkukhu, indlu eluhlaza, ukuphakama kwaphakathi noma ukuphakama kwensimbi, isikhumulo sezindiza kanye ne-hangar, njll.
Senze amayunithi angaphezu kwe-1000 endawo yokugcina impahla yensimbi kanye nomhlangano wokusebenzela emazweni angaphezu kwe-145 eminyakeni engama-28 edlule.
LIDA isakhiwo sensimbi (isakhiwo sangaphambi kobunjiniyela) uhlobo olusha lohlelo lwesakhiwo sokwakha. Uhlelo lokwakhiwa kwesakhiwo lwakhiwa uhlaka oluyinhloko ngokuxhumanisa isigaba H, isigaba C, isigaba Z noma izingxenye zensimbi U. Uhlelo lokufaka lusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamapaneli njengodonga nophahla kanye nezinye izinto ezifana namawindi neminyango.